ကျော်ခ| November 13, 2012 | Hits:18,213
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ရာဇာ November 13, 2012 - 3:17 pm	တရားခံ တွေမိတာက ဟုတ်ပါပြီ…အရေးယူ ဘို့အစီအစဉ် ရောရှိရဲ့လား….တော်ကြာ ဘယ်သူ့ သားပါ..ဘယ်ဝါ့ သားပါ ဆိုပြီး အရေးမယူ ဘဲ လွှတ်လိုက်တာတွေက များနေတော့ ဒီတခါလဲ စောင့်ကြည့် ရအုံးမှာပေါ့….ကူညီပါရစေ ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကြီး ရေ…….
ထိုင်းမိန်းကလေးငယ် အသတ်ခံရမှု စွပ်စွဲခံ မြန်မာလူငယ် ၄ ဦး ပတ်သက်မှု မရှိဟုဆို
ပြည်မြို့က တရားမဝင် အနှိပ်ခန်းပိုင်ရှင် လင်မယားကို လူကုန်ကူးမှုဖြင့် အရေးယူ
စစ်တွေတွင် ကလေးငယ် နောက်တဦး အဓမ္မကျင့်ခံရမှု ဖြစ်
တာမွေတွင် ပါရမီယာဉ် အကြမ်းဖက်ခံရမှု ကျူးလွန်သူနှင့် အရိုက်ခံရသူများ ရှောင်တိမ်းနေ
တပ်မတော်သား ၁ ဦး အဓမ္မကျင့်ခဲ့သည့် ရခိုင်မိန်းကလေးငယ် သဂြိုလ်ပြီးစီး